iBroker: Luluphi uhlobo lomthengisi, inkonzo yabathengi, iimarike ezinikezelayo | EzeMali yoQoqosho
Namhlanje kukho ii-broker ezininzi ezahlukeneyo esinokuthi ngazo senze imisebenzi eyahlukeneyo kwiimalike zemali. Kodwa nangona kunjalo, ayingabo bonke abanokuthenjwa kwaye ayingabo bonke ababonelela ngokukwazi ukurhweba ngazo zonke iimarike. Kweli nqaku siza kuthetha nge-broker yaseSpain ebizwa ngokuba yi-iBroker, eye yafumana ukuthandwa kakhulu phakathi kwabathengisi bexesha elizayo.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga ne-iBroker, ndincoma ukuba uqhubeke ufunda. Siza kucacisa ukuba luhlobo luni lwe-broker, ukuba isebenza njani inkonzo yabathengi, zeziphi iimarike ezibonelela ngazo kwaye, ukugqiba, izinto eziluncedo nezingeloncedo ezivezayo.
1 Loluphi uhlobo lomthengisi iBroker?
1.1 Inkonzo yoMthengi
1.2 Iimarike ezinikezelwa yi-iBroker
2 Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kwi-iBroker
Loluphi uhlobo lomthengisi iBroker?
Xa sithetha nge-iBroker, sibhekisa kwi-derivatives broker yaseSpain. Oku kubandakanya i-Forex, ikamva kunye neemarike zeCFDs. Yazalwa ngo-2016 ngenxa ye-spin-off ye-Auriga Global Investors kwaye ilawula la masebe ayekade eqhutywa nguClicktrade. Namhlanje ngumthengisi wesalathiso eSpain enkosi kwiinkonzo kunye neemveliso enazo, apho ezinye ziye zathengiswa kwiimarike zamazwe ngamazwe. Kufuneka kuqatshelwe ukuba nguye kuphela umthengisi waseSpain ophumelele oku.
Kwiimarike zexesha elizayo, umnikelo we-iBroker mkhulu kakhulu, zombini kwiiplatifomu nakwiikontraka. Ke, lolona khetho lubalaseleyo ukuba sifuna ukuqala kolu hlobo lwentengiso eSpain.
Enye yamandla anikezelwa yi-iBroker iintlobo zayo ezahlukeneyo zenkonzo yabathengi. Ngale ndlela, abathengi banokwenza imisebenzi ezandleni zabo nanini na xa befuna, nto leyo iluncedo kakhulu kwaye iluncedo kwimarike njengoko ibaluleke kakhulu. ukhetho lwemali okanye ikamva. Ukuqhagamshelana nenkonzo yabathengi be-iBroker, sinokukhetha oku kulandelayo:
Thumela u email kule imeyile ilandelayo: customers@ibroker.es
Yiya e i-ofisi ephakathi ibekwe 102-104 Caleruega isitalato e Madrid. Olu khetho, ngokuqinisekileyo, lufumaneka kuphela kubantu abakuloo ndawo.
Biza ku ifowuni 917 945 900. Iiyure zakhe zi NgoMvulo ukuya kutsho ngolwesiHlanu ukususela ngentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kweyeshumi ebusuku.
Ayigcini nje ngokusinika iindlela ezininzi zonxibelelwano, kodwa kunye neshedyuli ebanzi kakhulu yokwenza oko. Ukongeza, sinenye indlela yokwazi iindaba zamva nje ezivela kulo mthengisi ngejelo lakhe likaTwitter. Nangona ingeyondlela ifanelekileyo yokusombulula imiba enxulumene neeakhawunti zethu zobuqu, sinokunxibelelana noluntu kwaye sibone uhlaziyo lwamva nje.
Iimarike ezinikezelwa yi-iBroker
Inkalo ebalulekileyo xa ukhetha i-broker iimarike esebenza kuzo. Siza kudwelisa ukuba zeziphi iimarike ezikhoyo kwi-iBroker:
Ikamva: Yenza ukuba kwenzeke ukuthetha-thethana kwezona ntengiso zithengiswayo kwihlabathi liphela naseYurophu, njenge Dax, Eurostoxx, Mini-DAX, Ibex, SP500, Mini-Ibex, Bund kunye neSpanish Bond, phakathi kwezinye ezininzi.
CFDs kwi stocks kunye ne ETFs: Ngokukodwa kwiimarike zaseSpain, zaseYurophu naseMntla Melika.
Forex: Kwindlela yokuFikelela kwiMarike eNgqo, i-iBroker ivumela ukusebenza kwimarike yotshintshiselwano lwangaphandle ngeebhanki ezingamashumi amabini zizonke ezibonelela ngemali yokuhlawula amatyala.
CFDs kwizalathisi kunye nempahla yorhwebo: Ivumela ukusebenza kwiimarike eziphambili zehlabathi, ezifana ne-SP500, ioli, i-Dow Jones kunye negolide enokuguquguquka okukhulu.
Iinketho zemali: Unokufikelela kwiinketho ze-MEFF, i-CME kunye ne-Eurex, phakathi kwezinye ezininzi.
Ii-CFDs kwii-cryptocurrencies: Inika ithuba lokurhweba ngamaqhezu e-0.01.
Imakethi ye-LMAX: Yi-Prime Forex broker. Nge-iBroker sinokusebenza ngaphakathi kwesi sistim kunye neemeko zokurhweba eziphambili kakhulu kwifomathi ye-DMA.
I-X-Rolling FX: Yikhontrakthi ekhethekileyo yexesha elizayo eyenziwa kwiimali ze-MEFF. Ikuvumela ukuba ufikelele kwimarike ye-Forex ngokhuseleko olufanayo kunye namandla njengekamva, kodwa ngendlela eguquguqukayo. Kule meko, umphindisi ayikho i-100.000, kodwa i-10.000. Kufuneka kuqatshelwe ukuba eli xesha elizayo lingunaphakade, oko kukuthi, alipheli.
Ngaphandle kwezi marike, I-iBroker inenkqubo yokurhweba ezenzekelayo edibeneyo. Lurhwebo lwe-algorithmic apho unokufikelela ngaphezulu kwe-1.500 yeenkqubo zekamva kunye nezinye iimarike eziphuma kuyo.
Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kwi-iBroker
Ngoku ekubeni sisazi ngakumbi malunga ne-iBroker, siza kushwankathela iingenelo kunye nokungonakali kwalo broker waseSpain. Njengamanqaku ekuthandeni kwakho kufuneka ngumthengisi wokhuseleko oluphezulu kwimarike yaseSpain, ekubeni ilawulwa yi-CNMV kwaye ikhuselwe yi-Fogain, eqinisekisa ukuya kwikhulu lamawaka eeuro ngomnini ngamnye. Ukongeza, ingomnye wabathengisi abambalwa abasebenzisa iqonga elibizwa ngokuba yi-TradingView, eyenza kube lula ukubeka iliso kunye nokuhlalutya iitshathi.
Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba inika iinketho ezibalaseleyo zokuthengisa iimarike zeCFD, zombini ngeendleko zokusasazeka kunye neekomishini nge-LMAX. Asinakulibala malunga ne-cryptocurrency CFDs enikezela ngayo, iikomishini ezinomtsalane kakhulu. Ngaphandle kolu khetho lulungileyo, i-DMA yayo okanye imisebenzi ecocekileyo ye-ECN Forex yenye inqaku elixhasa lo mthengisi waseSpain.
Njengoko besitshilo ngaphambili, I-iBroker lolona khetho lufanelekileyo kubathengisi bexesha elizayo. Ukongeza, ineendlela ezininzi zokukhetha urhwebo oluzenzekelayo. Enye inqaku ekuthandeni kwayo kukukhululeka ekunika abathengi bayo ukunxibelelana neziko. Ngaphandle kwengxoxo eqinileyo kwimisebenzi ngokwayo, yinto ebalulekileyo ukuthathela ingqalelo ukuthuthuzela kwabasebenzisi.
Nangona kunjalo, kufuneka siqaqambise iintsilelo ezimbalwa ezivezwa yi-iBroker. Kwiikontraka ezininzi zamazwe ngamazwe iikomishini zalo mthengisi ziphezulu kunabanye abathengisi baseMelika. Yintoni egqithisile, Ayifumaneki kubarhwebi bamazwe ngamazwe abavela eLatin America.
Ukuba ufikile ukuzama iBroker, ungasitshela kwizimvo ukuba ucinga ntoni ngalo mthengisi kwaye ukuba uyayincoma.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » iBroker
Larry Page ucaphula